ေရခဲေရေသာက္ျခင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က လက္မည္းႀကီး | MyFood Myanmar
ေရခဲေရေသာက္ျခင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က လက္မည္းႀကီး
ရေခဲရေဟာ ရာသီ အပူကနေ လန်းဆန်းစေပြီး ရေသောက်ခြင်းဟာ ကယ်လိုရီကို လောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေခဲရေ အများပြား သောက်သုံးခြင်းဟာ သင်အတွက်တော့ မကောင်းပါဘူး။ ရာသီဥတု ဘယ်လောက်ပူပူ ရေခဲသောက်ခြင်းဟာ ကောင်းတဲ့ အကြံဉာဏ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရေနွေးဟာ သင်ရဲ့ချွေးပေါက်တွေကိုဖွင့်ပေးစေပြီး အသားအရည်ကို ချောမွေ့ပြီး လန်းဆန်းသွားစေတယ်လို့ ခံစား ရမှာပါ။ ရေခဲရေဟာတော့ ချွေးပေါက်တွေကို ပိတ်စေပြီး အသားအရည်ကို တင်းကျပ်စေပါတယ်။ ဒါဘာဖြစ်စေတာလဲ? ရေခဲရေ သောက်ခြင်းဟာ အစာကြေစနစ်ကို တိုက်ခိုက်စေလို့ပါ။
အစာ စားချိန်တွေမှာ ရေခဲရေ မသောက်ဖို့ တားမြစ်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို ဖတ်ဖူးကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း လူတွေက ဆက်ပြီး ပြုမူနေတုန်းပါပဲ။ အစာ စားချိန်မှာ ရေခဲရေ သောက်ခြင်းဟာ အစာကြေစနစ်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးပြီး မကောင်းတဲ့ အဆီတွေကို ကောင်းကောင်းမချေနိုင်တော့ဘဲ တဖြည်းဖြည်း စုပြုံလာတတ်ပါတယ်။ အဲ့မှာပဲ အဆီတွေက ကိုယ်ကို ဒုက္ခပေးတော့ပါပဲ။ အစားအသောက်လျှော့ပြီး ဝိတ်ချနေပေမယ့် အလေးချိန်မကျတဲ့ အကြောင်းအရာထဲမှာ ရေခဲလည်း ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။
ရေခဲရေဟာ လူရဲ့ သရက်ရွက်ကို မကောင်းတဲ့ အကျိုးတွေ သက်ရောက်စေပါတယ်။ သရက်ရွက်ဟာ ကိုယ်တွင်း အပူချိန်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျန်းမာတဲ့ သရက်ရွက်ဟာ ခန္ဓ္ဓာကိုယ်အတွက် အဆိုးတွေ မဖြစ်စေဖို့တိုက်ခိုက်ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရေခဲရေဟာ ဖျားနာခြင်းကို ခုခံပေးတဲ့ စနစ်ကို ပျက်ဆီးစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေခဲရေ ရုတ်တရက် သောက်လိုက်ရင် ဖျားနာတာမျိုး ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ။ အထူးသဖြင့် ဒီလို ပူပြင်းတဲ့ ရာသီဥတုမှာ ရေခဲရေဟာ လုံး၀ အဆိပ်ပါပဲ။ ရုတ်တရက် ဦးနှောက်သွေးကြော ပြတ်စေပြီး အသက်ဆုံးရှုံးမှုအထိတောင် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ရေခဲရေဟာ တခြား ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကိုလည်း နှောင့်ယှက်ပေးပါသေးတယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေကို ရေခဲရေ မတိုက်သင့်ပါဘူး။ ဒါဟာ ရင်ကြပ်ရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရေခဲရေ တစ်ခွက်သောက်ပြီး ခေါင်းကိုက်စေခြင်းဟာ လူ၁၀၀ မှာ 7.6% ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေခဲရေဟာ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက် ဝေဒနာနဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိပါတယ်။
ရေခဲရေကို ရာသီဥတု အပူမှာ သောက်သုံးရင် လည်ချောင်းနာတာ ကိုယ်လက်မအီမသာ ဖြစ်တာတွေကို ခံစားစေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခဏတာ လန်းဆန်းမှုအတွက်နဲ့ ကျန်းမာရေးကိုတော့ မလဲကြဖို့ သတိပေးပါရစေ။
ေရခဲေရဟာ ရာသီ အပူကေန လန္းဆန္းေစၿပီး ေရေသာက္ျခင္းဟာ ကယ္လိုရီကို ေလာင္ကြ်မ္းေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရခဲေရ အမ်ားျပား ေသာက္သံုးျခင္းဟာ သင္အတြက္ေတာ့ မေကာင္းပါဘူး။ ရာသီဥတု ဘယ္ေလာက္ပူပူ ေရခဲေသာက္ျခင္းဟာ ေကာင္းတဲ့ အႀကံဥာဏ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေရေႏြးဟာ သင္ရဲ႕ေခြ်းေပါက္ေတြကိုဖြင့္ေပးေစၿပီး အသားအရည္ကို ေခ်ာေမြ႔ၿပီး လန္းဆန္းသြားေစတယ္လို႔ ခံစား ရမွာပါ။ ေရခဲေရဟာေတာ့ ေခြ်းေပါက္ေတြကို ပိတ္ေစၿပီး အသားအရည္ကို တင္းက်ပ္ေစပါတယ္။ ဒါဘာျဖစ္ေစတာလဲ? ေရခဲေရ ေသာက္ျခင္းဟာ အစာေၾကစနစ္ကို တိုက္ခိုက္ေစလို႔ပါ။
MyFood Myanmar2019-11-08T09:56:28+06:30March 28th, 2016|Health, Knowledge|